5 WaysaGraphic Designer Can Stay Ahead of the Competition - MADLAB
Develop Your Interpersonal Skill
Beingagraphic designer means you will be working withalot of people. Be it at an agency, atacompany or asafreelancer, you will be communicating withalot of people throughout each project. Having good interpersonal skills can makeabig difference. Be professional and friendly, respond to your clients’ idea even if you don’t agree with them, give themaconstructive reason why it wouldn’t work and propose your own idea. Let them know that you areacreative genius and they can hand over their projects to you without an ounce of doubt.
There will be times when you have more than five projects in hand and three of those are due inaweek, it can beastressful time. That is why it is important to know the estimate of how long each project will take, so you can manage your time accordingly. It is also important to give your clients an update on the progress every now and then, let them know exactly how long it will take, don’t overestimate yourself and it is wise to takeafew extra days if you are not sure how much of your time it will take.
A lot of Graphic Designers in the industry have the required skills but lack creativity. Creativity is hard to come by, but you can enhance it overaperiod of time. One of the things that can hold you back from stepping up in your career is your comfort zone. Doing the same thing on multiple projects can limit your creativity. Once you are boxed in your comfort zone, it’s very hard to get out of it. There arealot of ways to open up your creativity, look for ways to inspire your ambition and learn new skills. You already know how to draw and sketch but haven’t done it inawhile; it might beagood idea to start by going back to the basics. When you are inspired to create, you are not just making things you saw somewhere or doingathing you’ve already done onaprevious project. You can create your own designs which are far more fulfilling.
Keep Up With The Industry Trend
A lot of brands are now using social media to promote their brands; it is required for you to be an active member of social media. You can followadesign blog on the blogosphere for inspiration, so that you can look at graphic design projects from around the world, not only where you live. This way your vision is expanded and your creativity is fulfilled. There might beanew design software you haven’t learned yet, you could joinanew class to learn something new and interact with other people with the same profession. Another way of keeping up with what is trending in graphic design is to keep your creative eye open to unexpected possibilities, you can go to the book store and look at cover designs and magazines for inspirations too.
Expand Your Knowledge of Design
There are many types of design jobs, understanding about the functions of other design mediums can be of an advantage to you. You might not be working forasoftware developer anytime soon, but knowing User Experience Design will keep you up-to-date with trends. Knowing about architecture and furniture design can be beneficial too, and you can apply those design methods and ideas in your own work. You will find no shortage of graphic design blogs online, and the internet is full of learning resources. Expose yourself to not just Graphic Designs, but all other designs in general, learn about how people design things and objects you see every day around you.
ပြိုင်ဘက်တွေကြားမှာ Graphic Desingerကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ သိထားသင့်သည့် အချက် (၅) ချက်
Graphic Designers တွေဟာကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ပုံရိပ် ရဲ့နောက်ကွယ်မှ ဖန်တီးရှငများဖြစ်ကြသည်။ Photoshop၊ Illustrator နှင့် InDesign ဖြစ်ကြသော design software များအသုံးပြုရာတွင်အလွန်ကျွမ်းကျင်ကြသည်။ သို့ပေမဲ့ ဤ softwareများ ကျွမ်းကျင်ရုံမျှနဲ့တင်အခြား Graphic Designer များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်၍မရနိုင်ပါ။ Graphic Designer ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန် လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို Graphic Designer တိုင်းသိကြမှာပါ၊ အောက်ပါတို့သည် သိထားသင့်သောအရေးကြီးသည့်အချက် (၅) ချက်ဖြစ်သည်။
Graphic Desingerတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုသည်နှင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလူတွေအများကြီးနှင့်အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်သည်။ Agency တစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင်ဖြစ်စေ ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွင်ဖြစ်စေ project တစ်ခုပြီးတစ်ခုလူအများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ဆက်ဆံမှု ကောင်းမွန်ခြင်းသည်အရေးပါပြီးတန်ဖိုးရှိသောအရည်အသွေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ဆန်ဖော်ရွေစွာဆက်ဆံကာအလုပ်အပ်သူများ၏အကြံပေးမှုများကိုသေချာစွာအာရုံစိုက်ပြီးအဆင်မပြေမှု များကိုလည်းလေးစားစွာဖြင့်ပြောပြပြီးဒီဇိုင်းအကြံများပေးရမည်။ ဖန်တီးရှင်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းမသကာင်္စိတ်လုံးဝမရှိပဲ project များကိုစိတ်ချစွာအပ်ပေးထားနိုင်ကြောင်းအသိပေးပါ။
ကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှ project များငါးခုထက်ပိုရှိပြီးသုံးခုလောက်မှာတစ်ပတ်အတွင်းပြီးအောင်လုပ်ရမည့်အခြေအနေများဖြစ်လာနိုင်သဖြင့်အဆိုပါအချိန်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုများရှိလာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် project တစ်ခုချင်းဆီကိုပေးရမည့်အချိန်တွေကိုသိထားပြီးလိုအပ်သလိုစီမံခန့်ခွဲထားနိုင်ဖို့ဟာအရေးကြီးပါသည်။ ကိုယ့်ကို project အပ်ထားသူတွေကိုလည်းမကြာမကြာ project ၏ အခြေအနေကိုအသိပေးထားဖို့လိုအပ်ပါသည်၊ ကြာမြင့်မည့်အချိန်ကိုလည်းတိကျနိုင်သလောက် အသိပေးထားရန်လိုအပ်ပါသည်၊ project တစ်ခုအတွက် လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေကိုအတိအကျမပြော နိုင်ပါကတစ်ရက်နှစ်ရက် အချိန်ပိုယူထားခြင်းသည် နှစ်ဖက်လုံးအတွက် အဆင်ပြေစေပါသည်။
Graphic Designerအများစုဟာ ကျွမ်းကျင်မှုရှိသော်လည်းတီထွင်ဖန်တီးနိုင်မှုပိုင်းမှာအားနည်းကြတာတွေများသည်။ ဖန်တီးနိုင်မှုဟာခက်ခဲ့သော်လည်းအချိန်ပေးပြီးသင်ယူလေ့လာနိုင်သည်၊ comfort zone ဟုခေါ်သောသက်သာဇုန်တွင်သာနေခြင်းသည် Desingerတစ်ယောက်၏တိုးတက်မှုကိုဟန့်တားနေသောအရာဖြစ်သည်။ Project တိုင်းတွင် တတ်ထားသောပညာကိုပဲထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုနေခြင်းသည် ဖန်တီးနိုင်မှု အားဟန့်အတားဖြစ်နိုင်သောကြောင့် Comfort Zone ထဲမှာအထိုင်ကျသွားပြီဆိုလျှင်ပြန်ထွက်ဖို့မလွယ်တော့ပါ။ ဖန်တီးဥာဏ်ကို နှိုးဆော် နိုင်တဲ့နည်းလမ်းများစွာရှိသည်၊ ကိုယ်၏ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ရည်မှန်းချက်များကိုတိုးမြင့်စေနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။ ပန်းချီဆွဲခြင်းအခြေခံပညာကို ပြန်လည်လေ့ကျင့်ပြီးဖန်တီးချင်သောစိတ်များပေါ်ထွက်လာအောင် ပြန်လည်လေ့ကျင့်နိုင်သည်။ Project အဟောင်းတွေအတိုင်း design တွေပြန်သုံးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ design အသစ်များဖန်တီးနေရတဲ့အတွက် designer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပိုမိုဂုဏ်ယူနိုင်ပါသည်။
ယခုနောက်ပိုင်းတွင် brand တိုင်းလိုလိုအွန်လိုင်းပေါ်၌ brand ပုံရိပ်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လူသိများလာအောင် နေရာယူလာကြသည်။ ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်အနေဖြင့် အင်တာနက်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ Design နှင့် ပတ်သက်သောဘလော့များကို follow လုပ်ထားပါ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ design များကိုသိရှိထားခြင်းသည် ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်၏အမြင်နှင့် ဖန်တီးနိုင်စွမ်းများကျယ်ပြန့်လာနိုင်သည်။ မသိသေးသောဒီဇိုင်းဆော့ဝဲအသစ်များရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မည်၊ သင်တန်းများတက်ခြင်းဖြင့် သင်ယူခြင်းသာမကလိုင်းတူသောအခြားဒီဇိုင်နာများဖြင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်သည်။ ရောက်လေရာတိုင်းတွင် မထင်မှတ်ထားသောပုံရိပ်များအားဒီဇိုင်နာမျက်လုံးဖြင့်ကြည့်ပါ၊ စာအုပ်ဆိုင်များတွင် စာအုပ်နှင့် မဂ္ဂဇင်း design များမှလည်းလေ့လာနိုင်သည်။
ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းဟာအလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ အခြားဒီဇိုင်းပုံစံများကိုလေ့လာခြင်းသည် လိုအပ်မှုတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်းသိထားလျင်အထောက်အကူပြုနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ Software Engineer အနေဖြင့် လုပ်ရန် စိတ်ကူးမရှိသော်လည်း (User Experience Design) ဟုခေါ်သော software design အားလေ့လာထားနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ဗိသုကာ နှင့် ပရိဘောဂဒီဇိုင်းပညာများကိုသိရှိနားလည်ထားခြင်းသည် အကျိုးရှိလာနိုင်သည်။ သိရှိထားသောအခြားဒီဇိုင်းများကိုကိုယ်ပိုင် Graphic Design များတွင်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်သည်။ အင်တာနက်ကြီးသည် အချိန်ပြည့် ကိုယ်တိုင် ရှာဖွေလေ့လာနိုင်သောစာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်၊ Graphic Design တစ်ရပ်တည်းပင်မဟုတ်ပဲအခြားဒီဇိုင်းရပ်များ နှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်းသည် ကောင်းကျိုးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ နေ့စဉ်တွေ့ရှိနေသောအရာများ ၏ဒီဇိုင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ပုံများကိုလေ့လာခြင်းသည် လည်းပိုမိုအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။